Maamulka Koonfur Galbeed oo lagu wareejiyay Ciidamo gaar ah – Radio Baidoa
Maamulka Koonfur Galbeed oo lagu wareejiyay Ciidamo gaar ah
By Webmaster	 On Jun 1, 2020
Madaxweynaha Dowlad Goboledka Koonfur Galbeed oo maalmahaan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu wareejiyay Ciidamo ka tirsan Booliska Gaarka ah ee KG oo Tababar siineysay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Munaasabad Ciidamadaan lagu wareejinayay ayaa waxaa ku sugnaa Taliyeyaasha Ciidanka Booliska iyo Asluubta Soomaaliya, kuwa Koonfur Galbeed iyo madax kale ,waxaana Ciidamadaas loogu talo sugida amniga deegaannada Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Dowlad Goboledka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa sheegay in Ciidamada looga baahan yahay inay fuliyaan howlgallo kala duwan oo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab.
Waxaa uu sheegay in Ciidamadaan ay sigaar ah uga howlgelayaan Gobolka Shabeellaha Hoose,waxaana uu Ciidamada iyo saraakiishooda uu ugu baaqay inay si wanaagsan Shacabka ula dhaqmaan.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Janeraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in Ciidamadaan ay yihiin kuwo niyad wanaagsan oo u diyaar ah howlgallo,isaga oo sirasmi ah ugu wareejiyay Maamulka Koonfur Galbeed
Xukuumadda FS oo billowday fulinta Amarkii Ra’iisul Wasaaraha